ဆေးရုံရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်လို့ဆိုပြီးရန်ကင်းကလေး ဆေးရုံမှခွဲစိတ်မပေးတော့ပါ – Myanmar Magazine
March 8, 2019 myanmarmagazine	ပြည်တွင်သတင်း
ရန်ကုန်ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံမှာဒီနေ့( ၇. ၃ .၂၀၁၉)မှာခွဲစိတ်ရမယ့် နှလုံးရောဂါသည်သမီးလေးကိုအလှုခံပေးထားတဲ့ပိုစ် The Voice သတင်းစာမှာပါလာလို့ ဆေးရုံရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်လို့ဆိုပြီး ဆေးရုံမှခွဲစိတ်မပေးတော့ပါ 😞 😞
ရန်ကုန်ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံမှာခွဲစိတ်ရမယ့်သီးလေးစုရဒီ နိုင်ကုန်ကျစားရိတ်မှာသိန်း၅၀ရှိပြီး၊ဆေးရုံမှ၂၅သိန်းစိုက်ေ ပးပြီးကလေးမိဘတွေမှ၂၅သိန်းကုန်ကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည် သို့ပေမယ့်မိဘတွေခဗျာမှာမတတ်နိုင်ရှာတော့ ကျွန်တော်ဆီအကူအညီတောင်းရာမှ ( ၄. ၃.၃၀၁၉)မှာပိုစ်တင်ပြီးအလှုခံပေးခဲ့ရာငါးသိန်းငါးသောင်းကျပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၆.၃.၂၀၁၉ထုတ်The Voiceသတင်းစာမှာ သမီးလေးအလှုခံထားတဲ့ပိုစ်ပါလာလို့ ဆေးရုံရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်လို့ဆိုပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှလူကြီးများမှခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးအားပြောဆိုလာပါသဖြင့် ဆရာဝန်ကြီးမှမခွဲစိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းညီမထက်ထက်အောင်မှဖုန်းဆက်လာပါသည်။ကလေးမိဘနဲ့ညီမထက်ထက်အောင်တို့မှဆရာဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံပြီးတောင်းပန်ခဲ့သော်လဲမရခဲ့ပါ။
ဆရာကြီးကပြောသည်မှာ ခွဲစိတ်ကုန်ကျစားရိတ်အားလုံးဆေးရုံမှအကုန်ကျခံနိုင်တော့မှခွဲစိတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လာမယ့်ဇွန်လတွင်မှဆေးရုံပြန်လာပြရန်ချိန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကလေးကိုလောလောဆယ်မခွဲလဲရပါတယ်လို့လဲပြောခဲ့ပါတယ်။
ကံဆိုးရှာတဲ့သမီးလေးပါ ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံမှာခွဲလို့မရလဲမဲဆောက်မယ်တော်ဆေးခန်းမှတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ဆေးရုံကြီးမှာအခမဲ့ခွဲစိတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့ကပြင်ပဆေးရုံကြီးများတွင်ခွဲစိတ်ဖို့လဲစဉ်းစားနေပါတယ် အဲ့ဆေးရုံတွေမှာခွဲရင်တော့ သိန်း၁၃၀ကျော်ကုန်ကျပါမယ်။သမီးလေးနှလုံးခွဲစိတ်နိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦး
အမျိုးတွေ 😞 😞ONE TO ONE ပြည်သူ့ကူညီရေးကိုဝမ်း ဖုန်း ၀၉၄၄၄၆၆၆၅၈၆မန္တလေးမြို့
← အတိုင်ပင်ခံခရီးစဉ်မှာ ကားပေါ်ကနေပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ သက်တော်စောင့်မချယ်ရီထက်
မိဘမဲ့ကလေးတွေကို ကစားကွင်း လိုက်ပို့ပေးမယ့် အိမ့်ချစ် →